Prof. Jannagale oo taageeray mamnuucidda DP World sheegayna in uu yahay musharrax Madaxweyne Puntland (dhegayso) – Radio Daljir
Prof. Jannagale oo taageeray mamnuucidda DP World sheegayna in uu yahay musharrax Madaxweyne Puntland (dhegayso)
Maarso 15, 2018 1:10 b 0
Prof. Cabdirisaaq Cabdullaahi Jama “Jannagale” oo ah aqoon yahan deggan dalka Mareykanka si weynna u darsa siyaasadda caalamka gaar ahaanna tan gobolka Beriga Afrika ayaa wareysi gaar ah oo uu siiyey Radio Daljir waxa uu si diirran u soo dhaweeyey go’aankii ay dhawaan golaha shacabka ee Baarlammaanka Soomaaliya ka gaareen heshiiska Berbera, dalkana looga mamnuucay shirkadda DP World. Go’aankaas waxa uu hadda horyaalla Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaliya.
Jannagale ayaa intaas ku daray suurtagalnimada in ay wali haysato fursad ay dalka kaga sii shaqayn karto shirkadda la mamnuucay ee DP World.
Prof. Jannagale oo kamid ah murashixiinta u taagan qabashada hoggaanka PL ayaa docda kalena ka hadlay hammigiisa arrintaas la xiriira. Wuxuuna khadka telefoonka ee dalka Mareykanka ugu warramay Axmed Sh. Max’ed “Tallman” oo ku sugan studiyeheenna Daljir Bossaso.
Siyaasadda & Dhaqaalaha 478 Wararka 20328
Guddoomiye hore Siciid Xasan Shire: “Puntland wax hadda shaqeeyaa maba jiraanba, hay’adihii codbixinta iyo kuwii xisbiyada ma suurtagelin …”